फेसबुकले ल्यायो बोलेरै फोटो–भिडियो लिन सक्ने ‘स्मार्ट चस्मा’, ‘फेसबुक एउटा भिडियो लिउँ’ भन्दा चस्माले खिच्छ भिडियो
फेसबुकले आफ्नो पहिलो ‘स्मार्ट ग्लासेस’ सार्वजानिक गरेको छ जसमा फोटो र भिडियो खिच्नका लागि दुईवटा क्यामरा जडान गरिएको छ ।
चस्माको लक्जरी ब्रान्ड रे–ब्यानसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यस स्मार्ट ग्लासेसलाई ‘रे–ब्यान स्टोरिज’ को नाम दिइएको छ । यो फेसबुकले निकालेको पहिलो चस्मा हो ।
यो चस्मालाई २०१६ मा निकालिएको स्न्यापच्याट चस्मा जस्तै किसिमको भनिएको थियो तर फेसबुकले यसलाई फरक उत्पादन ठहर गर्दै आएको छ ।
यसलाई प्रयोग गर्न चस्मामा भएको एउटा बटनलाई थिच्नुपर्छ । भिडियो खिच्न बटनलाई थिचिरहनुपर्छ भने फोटो लिन चाहिँ एकपटक मात्र क्लिक गर्दा पुग्छ । त्यस्तै फोटो खिच्न हामीले ‘भ्वाइस कमान्ड’ अर्थात बोलेर निर्देशन दिन पनि सक्छौँ ।
‘हे फेसबुक टेक अ भिडियो’ अर्थात फेसबुक एउटा भिडियो लिऊ भन्दा चस्माले भिडियो लिन सुरु गर्नेछ । त्यस्तै यसमा स्पिकर पनि जडान गरिएको छ जस मार्फत हामीले गीत सुन्न अनि फोन गर्न सक्नेछौँ ।
यसको मुख्य उद्देश्य भनेको, हामीले कुनैबेला फोन ब्यागमै छाड्यौँ भनेपनि यस मार्फत आफ्ना यादगार क्षणहरु खिच्न पाउनेछौँ त्यो पनि हात नचलाइन । विशेषगरी बच्चाहरुसँग घुम्न गएका बेलामा फोनको प्रयोग नगरि यस मार्फत सजिलै राम्रा क्षणहरुको तस्बिर या भिडियो लिन सकिनेछ । ती तस्बिर र भिडियोको गुणस्तर स्मार्टफोन जत्तिको नभएपनि स्पष्ट र राम्रै रहेको प्राविधिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । त्यस्तै यसलाई सनग्लास र क्यामरा दुवैका रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु अर्को विशेष उपयोगीता हो ।
त्यसैले पनि यो कन्सेप्टलाई रोचक मानिएको छ ।
यसमा खिचिएको भिडियो या तस्बिर अटोमेटिक फेसबुकमा पोस्ट हुँदैन । हामीले आफ्ना तस्बिर र भिडियोहरु पछि डाउनलोड गरेर चाहे अनुसार सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्न सक्नेछौँ ।
यस सम्बन्धी एक मात्र विवाद भनेको गोपनीयताको विषय रहेको छ । तर अहिलेको आधुनिक युगमा मानिसहरुले चाहने हो भने हर किसिमले क्यामराको दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै यसबाट कुनैपनि भिडियो रेकर्ड गर्दा चस्मामा एउटा एलइडी लाइट बल्ने गर्दछ ।
त्यस्तै भिडियो लिनलाई चस्माको छेउमा हात लगेर थिच्नुपर्ने हुनाले पनि कसैले थाहा नपाउनेगरि यसको प्रयोग गर्न कठिन रहेको फेसबुकका ‘एआर भीआर’ प्रमुख एन्ड्रयु बोसवर्थ बताउँछन् । समग्रमा यसको लेन्स र सेन्सर राम्रो रहेको प्राविधिक विद्हरुले बताएका छन् ।
फेसबुकले अब छिट्टै अर्को पूर्ण रुपमा ‘अगुमेन्टेड रियालिटी’ (एआर) फिचर भएको चस्मा पनि निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
एआर भन्नाले वास्तविक दुनियाँका कुरालाई कम्प्युटर मार्फत नौलो अन्र्तक्रियात्मक अनुभव सिर्जना गराउन सक्ने प्रविधि हो ।
यसले दृश्य, सुनाइ लगायत हाम्रा विभिन्न ‘सेन्स’ हरुलाई विस्तार गरिदिने काम गर्दछ । यो एआर चस्मा चाहिँ हाल सार्वजानिक स्मार्ट ग्लास भन्दा आधुनिक प्रविधियुक्त हुनेछ ।
फेसबुकको नाम परिवर्तन हुँदै, के राखिन्छ नयाँ नाम ?
आइफोनको ‘आइ’को अर्थ के हो ? स्टिभ जब्स्‌ले किन राखे ‘आइफोन’ नाम ?
कोही छ त आँट हुने ? यो मेसिन बनाउन सक्नेलाई १० लाख दिन्छु भन्दै महावीर पुनले गरे यस्तो घोषणा
फेसबुकको यी ३ फिचर जसबाट तपाईले सजिलै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ
एक मिनेटभित्र इन्टरनेटमा के–के हुन्छ ? जान्नुहोस् यी रोचक तथ्यहरु